Semalt သည် Real-Time Penguin နှင့်အခွင့်အာဏာနှင့်ချိတ်ဆက်တည်ဆောက်ခြင်း၏အင်္ဂါရပ်များကိုရှင်းပြသည်
နောက်ဆုံးတွင် Google သည် Penguin 4.0 algorithm ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပင်ဂွင်း ၄.၀ ကြေငြာချက်သည်အဓိကအချက်နှစ်ချက်ကိုဆိုလိုသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ Penguins သည်အရည်အသွေးနိမ့်သည့် SEO များကိုဖယ်ရှားပြီးဖျက်သိမ်းသရွေ့ရပ်တန့်နေသောဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အစစ်အမှန်အချိန်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ Penguin သည်ယခု ပို၍ အသေးစိတ်ကျပြီး version 2.0 မှ page-level နှင့် keyword-level ပြစ်ဒဏ်များသို့တစ် ဦး ချင်း link link များထပ်ထည့်နိုင်သည်။
Google သည် Panda နှင့် Penguin တို့ကိုသူတို့၏အဓိကအဆင့်သတ်မှတ်ချက် algorithm တွင်ပေါင်းစပ်လိုက်သောကြောင့်လူသိများသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အချက်များပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Penguin သည်ဂူဂဲလ်ဝဘ်ကိုတွားသွားသည့်အခါသတိပေးချက်များနှင့်တုန့်ပြန်ချက်များ၏အရေးကြီးမှုကိုပယ်ဖျက်သည်။
Semalt ၏ Customer Success Manager, Ivan Konovalov, real-time Penguin processing ၏အရေးကြီးသော ကဏ္ aspectsများကိုထိုးထွင်းသိမြင်သည်။
John Mueller, Gary Illyes နှင့် Matt Cutts တို့သည်ချိတ်ဆက်မှု၏အဆင့်မြင့်အချက်ပြမှုတစ်ခုအနေနှင့်အရေးပါမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့်ချိတ်ဆက်မှုအပေါ်မှီခိုခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလည်းသတိပေးသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် SEO ဗျူဟာနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည်၎င်းတို့ကိုသီးခြားစီအာရုံမထားသင့်ပါ။ ၎င်းတို့သည်ထူးချွန်သောစျေးကွက်၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်သင့်သည်။
ပင်ဂွင်း ၄.၀ ကြေငြာချက်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များဖန်တီးရန်အာရုံစိုက်ပါ
Link အစီအစဉ်များစာမျက်နှာ။ ထူးခြား။ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာသည်အရည်အသွေးမြင့်လင့်များကိုပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည့်အခြား ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတိုးပွားစေရန်ကူညီသည်
Webmaster လမ်းညွှန်ချက်များ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြင်ပ၌စဉ်းစားရန်နှင့်ပြိုင်ဘက်များထံမှထွက်ခွာရန်ကူညီပါ။
မူလပင်ဂွင်းကြေငြာချက်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များဖန်တီးခြင်းလိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြသည်
ဂူဂဲလ်ရဲ့အဆိုအရပစ္စည်းရဲ့အရည်အသွေးဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်၊ အသိပညာမြှင့်တင်ခြင်းသည်အရည်အသွေးနှင့်အတူတကွလက်တွဲသွားသည်၊ သင်သည်အခြားဘလော့ဂါများနှင့် site ပိုင်ရှင်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်၊ အပ်ကိုရွှေ့နိုင်သည့်ချိတ်ဆက်မှုများတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ လူအများစုကသူတို့ site ၏တန်ဖိုးကိုမသတ်မှတ်မီဆိုဒ်များကိုတည်ဆောက်ကြသည်။ ဖြေရှင်းချက်သည်တန်ဖိုးကိုဖန်တီးရန်နှင့်ထိပ်ဆုံးမှ link link တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ နည်းဗျူဟာများတည်ဆောက်ရန်နည်းလမ်းအနည်းငယ်ရှိသည်။
၁။ အခြေခံရှာဖွေခြင်း။ အဆင့်မြင့်သောရှာဖွေရေးအော်ပရေတာများသည်အသုံးပြုသူအားလိုအပ်သောကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောအဆင့်မြင့်အဆင့်ရှိသောစာမျက်နှာများကိုရှာဖွေရန်ကူညီသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများများလေ၊ အလားတူအရင်းအမြစ်များကိုချိတ်ဆက်ရန်နှင့်သင်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်စဉ်းစားရန် ပို၍ လွယ်ကူလေဖြစ်သည်။
2. ပြိုင်ဘက်ရှာဖွေရေး။ ပြိုင်ဘက်များအသုံးပြုသောလင့်ခ်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်သင့်အကြောင်းအရာများကိုတန်ဖိုးရှိသောအရင်းအမြစ်များတွင်နေရာချရန်ရွေးချယ်စရာများရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
3. Post ည့်သည် Post ကိုရှာဖွေရေး။ ၎င်းသည်အခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏ပရိသတ်နှင့်ထိတွေ့ပြီးအရည်အသွေးကိုပထမ ဦး စားပေးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သဘာဝကျစွာလုပ်ဆောင်သင့်သည်။
၄။ အကြောင်းအရာနှင့်အဝေးရောက်။ အလွန်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများစွာဖြင့်အခြားဆောင်းပါးများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုဒ်များကိုရှာပြီးပိုင်ရှင်များကိုသူတို့ပြန်ချိတ်ဆက်နိုင်မနိုင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, site အကြောင်းအရာသည်ရှိပြီးသားအရာပေါ်တည်ဆောက်သင့်သည်။
၅ ။ ဤအချက်သည်နံပါတ် ၄ နှင့်ဆင်တူသော်လည်းဤနည်းသည်စီးပွားရေးအတွက်အဖိုးတန်သည်ဟုယူဆသောအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်နွယ်နေသောအဆက်များကိုရှာဖွေသည်။ သင်၏အကြောင်းအရာကို အသုံးပြု၍ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြင့်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်အားကူညီခြင်းဖြင့်ကွက်လပ်ကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။
၆။ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည် ၄ င်းတို့၏ site ရှိအမှတ်တံဆိပ်လင့်ခ်ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့်စပွန်ဆာအချို့ကိုလက်ခံနိုင်သည်။
၇။ ထိတွေ့မှု၊ အချိတ်အဆက်များထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ယုံကြည်မှုနှင့်ဆီလျော်မှုရှိစေရန်ကူညီပေးပါ။
အကောင်းဆုံး SEO ဆိုသည်မှာအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝစေရန်ဖြစ်သည်။ spammy လမ်းညွှန်စာရင်းအများစုသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိသောကြောင့် SEO ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာတည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာအနည်းငယ်သာပါ ၀ င်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးချိတ်ဆက်မှုရှိသောအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ချိတ်ဆက်တည်ဆောက်မှုအတွက်အချိန်ကုန်ပြီးအားစိုက်ထုတ်မှုသည်ဆိုက်အတွက်တန်ဖိုးအနည်းငယ်သာဖြစ်စေ၊ လုံးဝတန်ဖိုးမရှိဖြစ်စေပါ။ စျေးပေါသော SEO သည်၎င်း၏မြင့်မားသောဝယ်လိုအားမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Penguin 4.0 သည်တန်ဖိုးနည်းသောနည်းစနစ်များကိုလစာပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်သည်။ သို့သော်ချိတ်ဆက်တည်ဆောက်ခြင်းသည်အရည်အသွေးရှိသောအရာများကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်အသိပညာတိုးပွားရန်လိုအပ်သည်။